Ciidamada Amisom oo dabin u dhigay caruur kadibna dilay mid ka mid ah - Caasimada Online
Home Warar Ciidamada Amisom oo dabin u dhigay caruur kadibna dilay mid ka mid...
Ciidamada Amisom oo dabin u dhigay caruur kadibna dilay mid ka mid ah
Muqdisho (Caasimada Online) – Gawaarida gaashaaman ee Ciidamada Amisom ayaa dar daray mid kamid ah caruurta yar yar ee ku nool magaalada Muqdisho, shalay.
Hase yeeshee warar laga naxolagana yaabo, ayaa kazoo baxaya qaabka uu shilka u dhacay, oo lagu macneeyay shirqool.
Shilkan ayaa ka dhacay wadada Curubo ee degmada Shangaani oo ay marayeen gawaarida Xawliga ku socda ee Amisom, waxaana ay dhacdada timid kadib markii Askarta Amisom ay buskud iyo biyo ay u tuureen caruurta kadib iyagana ay u kala carareen.
Waxaana Intaa kadib goobta soo maray gaari xowli ku socda oo ay leeyihiin ciidamada Amisom oo jiiray mid kamid caruurta, sida ay sheegeen dad goob joog ahaa, oo la yaabay ficillada ciidanka Amisom.
Ehelada Canuga uu gaariga jiiray, ayaa warbaahinta u sheegay inay la hadleen ciidamada Amisom marka uu wiilka goobta kunaf baxay, waxaana ay noo sheegeen ayay yiraahdeen “diyo, laaakin ma cadda inay bixin doonaan iyo in kale”.
Taliyahii Ciidankaas Amisom ee gaariga la socday, ayaa u dagay dadka goobta joogay waxaana uu sameeyay balanqaad ah inay diyo dhiibiyaan.
Gawaarida Amisom ee Xawliga ku mara waddooyinka Muqdisho ayaa dad badan kulayay magaalada casimada ah, dhow goor oo hore